कांग्रेस–माओवादीबीच भएको ३ बुँदेमा के छ ? « News24 : Premium News Channel
कांग्रेस–माओवादीबीच भएको ३ बुँदेमा के छ ?
ओली सरकार विस्थापित गर्न कांग्रेस र माओवादीबीच सातबुँदे सहमति भएको छ । तर, त्यसबाहेक गोप्य सहमति पनि भएको छ । सहमतिअनुसार ०७४ माघसम्म स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय संसद्को चुनाव भइसक्नुपर्नेछ । यसका लागि कांग्रेस–माओवादीबीच अबका १८ महिनामा नौ–नौ महिना सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको छ ।
कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बुधबारको बैठकमा नेता विमलेन्द्र निधिले गोप्य तीनबुँदे सहमतिको विषय जानकारी गराएका थिए । ‘सातबुँदे सहमति अहिले सरकार गठनका लागि भएको हो । अब गठन हुने माओवादी नेतृत्वको सरकारले स्थानीय चुनाव गर्छ’ निधिको भनाइ उद्धृत गर्दै कांग्रेसका एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘गोप्य राख्ने सर्तमा तीनबुँदे सहमति भएको छ । यसमा पहिलो चरणमा माओवादी नेतृत्व, दोस्रो चरणमा हाम्रो नेतृत्वको सरकार हुने उल्लेख छ । प्र्रदेश र केन्द्रीय संसद्को चुनाव कांग्रेसको नेतृत्वमा हुन्छ भन्ने सहमति छ ।’
स्थानीय तहको नयाँ संरचनाअनुसार माघमा चुनाव गरेर प्रचण्डले चैतमा देउवालाई सत्ता हस्तान्तरण निधिको भनाइ छ । यसका लागि स्थानीय संरचना गठनको काम थालेको आयोगको म्यादलाई फागुनबाट घटाएर पुससम्म झार्ने समझदारी भएको छ ।
‘नयाँ संरचनाअनुसार स्थानीय तहको चुनाव गर्नुपर्छ, तर आयोगलाई फागुनसम्मको समय दिएको छ,’ कांग्रेस स्रोत भन्छ, ‘अब आयोगले स्थानीय तहको सीमांकनसहितका काम गर्ने समय पुसतिर सार्ने र माघ वा फागुनमा स्थानीय चुनाव गरेर माओवादीले कांग्रेसलाई चैतमा सत्ता हस्तान्तरण गर्ने सहमति छ ।’ आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।
काठमाडौं । न्यायालयको विकृति अन्त्य गर्ने उद्देश्यसहित सर्वोच्च अदालतले गठन गरेको समितिको प्रतिवेदन वर्षाेंदेखि सर्वोच्चमा